अष्ट्रेलिया बासस्थानका लागि किन लोकप्रीय छ, यस्तो छ रोचक तथ्यहरु - eNepal
अष्ट्रेलिया बासस्थानका लागि किन लोकप्रीय छ, यस्तो छ रोचक तथ्यहरु
by Manoj Poudyal २०७८, १७ पुष शनिबार 174
अष्ट्रेलिया महाद्वीप संसारको सबैभन्दा धनी देशहरू मध्ये एक हो। अष्ट्रेलियाका बासिन्दाहरूलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा र औसत आम्दानीभन्दा माथिको पहुँच छ। यो देश कोरल चट्टानहरू, ठूला मरुभूमिहरू र तटीय जंगलहरूबाट प्रभावित अद्वितीय जीवन शैली भएको देश पनि हो। अष्ट्रेलियामा यी सुबीधाहरुले गर्दा यो देश बस्नेहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको छ।
१ः हेल्थकेयर – अष्ट्रेलियासँग संसारको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरू मध्ये एक छ जसको फलस्वरुप यहाँको उच्च औसत आयु ८३ वर्षको छ। अष्ट्रेलियामा सार्वजनिक र निजी दुवै विकल्पहरू मिलेर बनेको मिश्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएको हुनाले यहाँका सत् प्रतिशत बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छ।
२: समृद्धी – अष्ट्रेलियामा संसारमा दोस्रो उच्च औसत सम्पत्ति छ। प्रति वयस्क औसत सम्पत्ति लगभग $४११,०६० छ। आगामी ५ वर्षमा करोडपतिको संख्या ४१ प्रतिशतले बढेर १.८ मिलीयन पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसंख्याको ६ प्रतिशत भन्दा कमको औसत नेट वर्थ $ १०,०००भन्दा कम छ।
३: आय असमानता – अष्ट्रेलियामा बस्ने उच्च लागतले केही बासिन्दाहरूको लागि समस्या निम्त्याउँछ। उच्च जीवनयापन लागतका कारण लगभग १३.२ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरू गरिबीमा बाँचिरहेका थिए र २०१८ मा खाना, पानी र आश्रय जस्ता आधारभूत सुविधाहरू लिन असमर्थ थिए। आय असमानता विस्तार हुँदै गर्दा १० प्रतिशत झन् गरिब हुँदै गएको छन् भने शीर्ष १० प्रतिशत धनी बन्दै। विगत २० वर्षमा गरिबीको दर घट्दै गएको बेला धेरै बासिन्दाहरू अझै पनि खाना, पानी र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू वहन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
४. गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओहरू) – अष्ट्रेलियामा गरीबी, विदेशी सहायता, शरणार्थी, शिक्षा र प्रजनन समस्याहरू जस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न समर्पित सयौं गैरसरकारी संस्थाहरू छन्। अस्ट्रेलियाका केही ठूला एनजीओहरू अस्ट्रेलियन रेड क्रस, एक्सन अन पोभर्टी, हेबिट्याट फर हुम्यानिटी हुन्। अष्ट्रेलियाभरि सयौं एनजीओहरू धेरै मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका छन् जसको कारण बासिन्दाहरू सजिलैसँग संलग्न हुन सक्छन्।
५. रोजगारी – अष्ट्रेलियामा रोजगारी दरहरू अन्य औद्योगिक देशहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत व्यक्तिसँग सशुल्क जागिरे गर्छन् जुन आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) को ६७ प्रतिशतको औसत रोजगारी दरभन्दा बढी हो। बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशत भन्दा कम छ। मे २०१९ को कुल उपलब्ध श्रमशक्तिको ६६ प्रतिशतले को रोजगार बजार ओगटेका छन्।
६. शिक्षा – अष्ट्रेलियामा ४३ विश्वविद्यालयहरू छन्। २५ र ६६ बर्ष उमेर बीचका वयस्कहरूको ८१ प्रतिशतले माध्यमिक शिक्षाको कुनै न कुनै रूप हासिल गरेका छन्। २०१६ को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले उच्च र मध्यम आय भएका देशहरूमा शैक्षिक उपलब्धिको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियालाई ४१ मध्ये ३९ औँ स्थानमा राखेको छ। प्रतिवेदनले आधारभूत शैक्षिक मापदण्डहरू अष्ट्रेलियाका १५ वर्षका उमेर समूहका ७१.७ प्रतिशतले मात्र पूरा गरेको पनि जनाएको छ।
७: जनसंख्या – अष्ट्रेलियाको क्षेत्रफललाई ध्यानमा राख्दै ७.६२ मिलियन वर्ग किलोमिटरमा फैलीएको देशको लगभग २५ मिलियन बासिन्दाहरूको अपेक्षाकृत सामान्य जनसंख्या छ। अष्ट्रेलियाको धेरैजसो भूमि क्षेत्र मरुभूमि (आउटब्याक भनेर चिनिन्छ) मिलेर बनेको छ, जसको मध्य क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म बस्न नसक्ने अवस्था छ। आउटब्याकमा पनि ६००००० मानिसहरू मात्र बस्छन्। फलस्वरूप, कुल जनसंख्याको लगभग ९०.१ प्रतिशत शहरी क्षेत्रहरू जस्तै सिड्नी, पर्थ, मेलबर्नमा बस्छन्।
८. स्वच्छ पानी – अष्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा सफा स्वच्छ पानीको पहुँच भएको रास्ट्र हो। विश्व बैंकको विकास सूचकका अनुसार अष्ट्रेलियामा स्वच्छ पानी र उचित सरसफाइमा शतप्रतिशत पहुँच छ । यद्यपि, पश्चिमी अस्ट्रेलियाका केही ग्रामीण समुदायहरू जस्तै बुट्टाह विन्डेन त्यति भाग्यमानी भएका छैनन्। पूर्वाधार, कोष र जलवायु अवस्थाको अभावले पानीका स्रोतहरूमा युरेनियमको असुरक्षित स्तर सिर्जना गरेको छ। यसको लागि सरकारी अधिकारीहरू पश्चिमी अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो शहर पर्थमा भविष्यको पानी आपूर्तिको बारेमा चिन्तित देखिन्छन्। ठूलो जनसंख्या र बढ्दो सुक्खा मौसमको कारण पर्थको पानी आपूर्ति स्थिर रहने आशामा पानी संरक्षण प्रणालीहरू डिजाइन गरिरहेको छ।
९. प्राकृतिक प्रकोपहरू – अष्ट्रेलियाको विशाल आउटब्याक र तटीय क्षेत्रहरूको कारण एक अद्वितीय जलवायु छ। दुर्भाग्यवश, समयको साथमा मौसममा हुने परिवर्तनहरूले अप्रत्याशित खडेरीहरू देखा पर्छन् जसको फल स्वरुप असिना आँधी, जङ्गली आगो र चक्रवातहरू जस्ता गम्भीर मौसमी घटनाहरू जन्माएको छ। फेब्रुअरी २००९ मा ब्ल्याक शनिबार बुश फायरले १७३ मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।भिक्टोरियामा मात्रै हजारौं विस्थापित भयो। जनसंख्या विस्थापनले दैनिक जीवनमा ठूलो अवरोधहरू निम्त्याउँछ र अधिक मानिसहरू गरिब हुन सक्छन् जसले अर्थव्यवस्थामा मन्दी ल्याउन सक्छ।
१०. अत्याधिक जनसङ्ख्या – अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको छ र २०५० सम्ममा ४० मिलियन बासिन्दा पुग्न सक्छ जुन हालको जनसंख्याको झन्डै दोब्बर छ। अधिकांश जनसंख्या वृद्धि प्रमुख तटीय शहरहरूमा भइरहेको छ। दुर्भाग्यवश, वर्तमान पूर्वाधारले यति ठूलो जनसंख्यालाई थेग्न भने गार्हो हुनेछ।पूर्वाधारमा लगानी गरेमा जनतालाई आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा सहज हुनेछ । यद्यपि आवश्यक पूर्वाधारको लागत अनुमानित १.५ ट्रिलियन रहेको छ त्यसैले अष्ट्रेलियाको सरकारले लगानीको लागि भुक्तान गर्न रणनीतिहरू विकास गर्नुपर्नेछ। परिवार नियोजन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई रोक्न र बाल हेरचाहसम्बन्धी नयाँ परिवारहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
अस्ट्रेलियामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विचार गर्दा विश्वको धनी देशहरू मध्ये एक मा पर्दछ भने अष्ट्रेलियामा जीवनयापनका बारेमा यी शीर्ष १० तथ्यहरूले प्रमुख शहरहरूमा आय दर र महँगो जीवन स्तरले विभाजन सिर्जना गरिरहेको देखाउँछ। धेरै बासिन्दाहरूले अझै पनि खाद्यान्न र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू किन्न संघर्ष गरिरहेका छन्। विशेष गरी देशको ग्रामीण भागहरूमा गरिबी एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
– काइल एरेन्डास